Adolf Hitler akanga miriwo | Apg29
Adolf Hitler akanga miriwo
Preschool kuda "kuponesa okunze" vose vana kudya miriwo.
Ndakafunga nezvazvo pamwe Adolf Hitler pandinoverenga kuti pane kukireshi kuchamhembe Sweden vanoda kuponesa "okunze" vose vana kudya miriwo. Chii chiri kuitika?
"Vamwe nyama haana, nekuti Hitler akanga miriwo. Zvokudya zvakanaka, zvakanaka chaizvo, asi zvataisazombofa fara."
Izvi anotsanangura imwe Hitler provsmakerska Margot Wölk kuti akapona Hondo Yenyika II. On ndiro Hitler vaiva miriwo, sauces, Fried madhishi cup zvibereko.
Hitler zvokudya urongwa hondo
Pane nepfungwa dzakasiyana sei Hitler akanga miriwo. Zvimwe nokuti nezvikonzero zvoutano nekuti akanga nezvinetso mudumbu rake.
To nyora Joseph Goebbels muna dhayari yake, April 26, 1942:
"A wandei chikamu yedu kukurukura wakayeriswa mutungamiri kuti miriwo mubvunzo. Ndiye zvikuru nechokwadi kupfuura kare kuti nyama kudya zvinokuvadza chavanhu. Chokwadi, anoziva kuti panguva yehondo haagoni kuchinja zvokudya zvedu zvitengeswa kumboda. Asi pashure pehondo, iye anoda kubata dambudziko iri. Zvichida Ndizvozvo. "
Ndakafunga nezvazvo pamwe Adolf Hitler pandinoverenga kuti pane kukireshi kuchamhembe Sweden vanoda kuponesa "okunze" by zvose vana kudya miriwo . Chii chiri kuitika?
Zvokudya zvose zvokune
MuBhaibheri unokwanisa kudya marudzi ose ezvokudya. Hapana chipingaidzo. Zvichida hapana dambudziko nokuda okunze kana worudzii zvokudya zvatinodya, asi pane zvimwe zvinetso zvakakwana. Zviya, kuchenesa muviri wako zvose zvokudya, Jesu pachake anoti.
Mark 7:18. Akati [Jesu] kwavari: Ko iwewo saka mapenzi? Musinganzwisisi kuti hapana ichibva kunze mukati maari chingamusvibisa? 19. Nokuti hazvipindi mumwoyo make asi mudumbu, kuburikidza icho chikafu zvose acheneswe uye ane magumiro kwayo.
Chimwe chinhu chinokosha
Uyezve, zviri kuita izvi muBhaibheri:
Mabasa 15:28. Nokuti Mweya Mutsvene uye tasarudza kwete kuti tirege kukuremedzai nomutoro upi zvawo kunze izvi zvakakodzera:
29. Kuti urege chinobayirwa zvifananidzo, neropa, uye kubva nyama yemhuka dzakadzipwa uye ufeve. Kana ukanyatsoongorora bvunza iwe nokuda ichi, muri kuita zvakanaka. Chisarai.
Self zvikonzero Ndinofarira izvi pamusoro chii zvinobatsira uye hakubatsiri: Idya zvose zvine mwero zvichava zvimwe hapana dambudziko.
Inyaradzo ichi anotipa. Hatidi kurara nemijenya mitemo uye chidhiraivho kuti vaponeswe. chimwe chete chinhu chinokosha uye kuti kugamuchira Jesu uye uchaponeswa.
I kamwe kuverenga pamusoro chiremba uyo akanwa marita maviri twakadai muto rimwe zuva nokuti zvaizova anobatsira. Akafa cirrhosis kuti chiropa chake kugona kubata twakadai zvikuru muto ose zuva.
Izvi pamwe okunze sokuti ane kunzvenga kudzora vanhu. Imhandoi ane chinangwa iri shure? Hazvinyaradzi here pakupedzisira kukwanisa kuisa kwaAntikristu pachigaro choushe?
Haufaniri kutya zvauri kudya, uye havafaniri kuva nehana yakaipa. Idya uye kunzwa zvakanaka. Regai kuwira pamusoro anoparadzirwa unouya dzakasiyana kushandisa uye kudzora upenyu hwako. anoparadzirwa kwakadaro kungoramba pachena munguva yatiri kurarama zvino. Ndicho chiratidzo nguva.
The chete chinhu chinokosha uye kukosha muupenyu hwako kuti iwe kugamuchira Jesu Kristu uye vaponeswe!
Rome 14:17. Nokuti umambo hwaMwari hahusi kudya uye zvokunwa asi kururama norugare uye nomufaro muMweya Mutsvene.